कांग्रेसले किन दलितलाई हेला गर्छ ? — KhabarTweet
- रोहित विश्वकर्मा, केन्द्रिय सदस्य, नेपाल दलित संघ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २९, २०७३ समय: १०:२२:४१
म २०४२ सालदेखी आजसम्म नेपाली कांग्रेसको एक सिपाइी हुँ । आजसम्म यो पार्टीमा रहेर विचलितहुनु परेन । तर आज म मेरो मनको कुरा गर्न चाहन्छु, किनकी झण्डै ३०–३५ बर्षको मेरो राजनीतिकयात्रामाआजकांग्रेस भएर दुःखीहुनु परेको छ । २०४२ सालमा नेपालविद्यार्थी संघमा आबद्ध भएको म यतिबेला नेपालीकांग्रेसको भोजपुर क्षेत्र नं १ को महाधिवेशनप्रतिनिधी छु । साथै नेपालदलित संघको केन्द्रिय सदस्य समेत रहेको छु ।
जिल्लाको दलितआन्दोलन अगाडी बढाउन दलित संघम सदस्यहुँदै दुई पटकसम्म सभापतिबनेको थिए । कुरा ९ दिन अघिको हो । नेपालदलित संघ भोजपुरको जिल्लाअधिवेशनमा म केन्द्रियप्रतिनिधीभएर अधिवेशन गराउनआफ्नै गृह जिल्लामाप्रमुखअतिथीथिए । अधिवेशन गराउन केन्द्रले मलाई दुई जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको थियो । जसमाभोजपुर पनि परेको थियो । अधिवेशन सकिएर जब जनसेवानिमाविको हलमाबधाई मन्तव्यदिइरहेको थिए, त्यहाँमलाई एक्कासी सुनियोजित आक्रमण भयो । अधिवेशनमा केही सदस्यताविवादथियो ।
कांग्रेसमा आवद्ध नभएकाअन्य पार्टीमा आवद्ध भएका केही साथीहरुलाई केन्द्रले जवरजस्त सदस्यताथपेर पठायो । जसमा केन्द्रियअध्यक्षमिनविश्वकर्माको भूमिका छ । मैले विधानअनुसार अघि बढौं भने, अन्य पार्टीमाभएका साथीहरुलाई ल्याउँदा केहीदिनयहाँ बस्छन्, फेरी उतै जान्छन् भन्ने मेरो तर्क थियो । किनभने विगतमापनियहाँत्यस्तै भएको छ ।
यद्यपी शान्तिपूर्ण वातावरणमा अधिवशेन सकिनलागेपछि म माथि आक्रमण भयो । मबधाई मन्तव्यदिइरहेको थिए । बत्तिएक्कासीनिभ्यो । त्यहीमौकामा म माथि सांघातीक हमलाभयो । मैले केही देखिन । एक्कासी मेरो आँखामाप्रहार भयो । मलाई लाग्छ आँखामा छुरा प्रहार भएको थियो । मेरो आँखा सबै बाहिर निस्किएको थियो ।
तत्कालजिल्लाकै सिद्धकाली अस्पताल मलाई पु¥याइयो । त्यहाँ मेरो उपचार सम्भवथिएन । राति नै मलाई धरानस्थितवीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगियो । २१ गते बिहानकरिब ६ बजे धरानपुगियो ।यहाँपनी मेरो उपचार सम्भवभएन । तत्कालै काठमाडौं मलाई ल्याइयो ।
काठमाडौंआउने वित्तिकै तिलगंगाआँखा अस्पताल भर्ना गराइयो । २२ गते मेरो दाहिने आँखाको अप्रेशनभयो । तत्काललाई मेरो आँखाको ज्योतीफर्किएको छ । मेरो उज्यालो हेर्न नचाहनेहरुलाई म फेरी उज्यालो लिएर जिल्लाmर्कदैछु ।
मेरो आँखाको ज्योतीफर्कन्छ भन्ने मलाई लागेकै थिएन । समयमै सही ठाउँमा आएकोले मेरो आँखाको ज्योती गुम्नबाट बचेको छ ।
मलाई मेरो आँखाभन्दापनि म आबद्ध पार्टी र म कार्यरत भातृ संगठनप्रति साह«ै चित्तदुखेको छ । मेरो अवस्था यस्तो हुँदा समेत पार्टीले कुनै चासो लिएन, चिन्ताव्यक्त गरेन ।
अरु त अरु म आफै केन्द्रिय सदस्यभएको संगठनले म प्रतिकुनै चासो चिन्तानलिदा साह«ै मन दुखेको छ । दलितहरुलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण पनिथाहाभयो । हामीदलितहरुलाई भिडाएरजुधाएर फाइदालिने कामभएको छ ।
मलाई ज्यानमार्ने उदेश्य सहितभएके आक्रमणमा पार्टीले सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै सहयोग गरेको महशुस गरेको छु । किनभने मलाई यत्रो आक्रमण हुँदा मेरो परिवारले प्रहरी प्रशासनमाउजूरी दिँदा समेत त्यहाँ पार्टीले रोक्ने, छेक्ने काम गरेको छ । मेरो परिवारले ज्यानमार्ने तथाअंगभंगउद्योग अन्र्तगतप्रहरीमादिपेश विश्वकर्मा र मिलनविश्वकर्मालाई किटानी जाहेरी दियो । तर प्रहरीले मिलनलाई उन्मुक्तिदिएको छ ।
यसमा पार्टीले कुनै चासो दिएको छैन् । बरु उनिहरुलाई उन्मुक्तिदिनको लागिप्रहरीलाई दबाबदिइरहेको छ । यसले नै प्रष्ट हुन्छ पार्टीले हामीलाई कुन रुपले हेर्छ भनेर । के हामी पार्टीको सधैं ढाल बनिरहनुपर्ने हो ?हामीमाथि पार्टीको हेलाकहिलेसम्म? हामीलाई जुँधाएर रजाँइगर्न पल्केको केहीसिमित नेताहरुकाकारण आज यो घटना हुनपुगेको छ । म यो हैसियतमाहुँदात यस्तो अवस्था छ भने अरुको अवस्था कस्तो होला?आज म सोच्नबाध्यभए ।
यो घटनामा पार्टीको आन्तरिक गुटको पनिप्रभाव छ । अनि मैले गरेको प्रगतीपनिबाधकबनेको छ । किनभने हाम्रो समाज त कस्तो छ भने कसैलाई केहीगर्ने पर्देन मात्रआफूले दुःख गरेर प्रगतीगरिदिए पुग्छ ।
हाम्रै समुदायका र हाम्रै पार्टीकाकतिपय साथीहरु यसअघि पनि म माथिखनिएकाथिए । यो घटनामा उनिहरुको पनि साथ छ ।
तर उनिहरुलाई के हेक्का छैन् भने यस्ता दिनहरु उनिहरुलाई पनि आउँछ र पार्टी मुखदर्शक बन्छ भनेर । यो घटनामा केन्द्रियअध्यक्षको भूमिका छ । क्रियाशिल सदस्यताविवाद माथिबाट लाद्ने काममिनविश्वकर्माबाटै भएको हो ।
अहिले यो घटनामा उहाँ बेखबर हुनुहुन्छ । उहाँ कस्तो राजनीतिगर्देहुनुहुन्छ ? एउटा आफ्नै सहकर्मी यो हालतमापुग्दा त उहाँलाई मतलब छैन । आफ्नै समुदायभजाएर, भ¥याङ बनाएर राजनीतिगर्ने यो कस्तो पारा हो ?कहिले सम्म यसरी उहाँ अघि बढ्ने हो ? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु । अनिमाउ पार्टी कांग्रेस, एउटा ३०–३५ बर्ष सम्मअविचलित रहेको एउटा कांग्रेसको सिपाँही कुटिदा, मारिदा समेत चुप बस्छ । यो घटनालाई मैले कसरी लिने । आमकांग्रेसजनले कसरी बुझने ?
कांग्रेसमाकार्यकर्ता कसरी सुरक्षितहुने ? मेरा यीप्रश्नहरुको उत्तर कांग्रेससँग छ ?
(भोजपुर क्षेत्र नं १ काकांग्रेस महाधिवेशनप्रतिनिधीतथा नेपालदलित संघका केन्द्रिय सदस्यविश्वकर्मासँग गरिएको कुराकानीमाआधारित)